Fanorenana sy vaovao Toby, asa fanentanana 12/05/2017 Fiangonana Loterana Malagasy FLM Orleans
Tamin’ny zoma 12 mey 2017 lasa teo no nanao fanentanana tao amin’ny Fréquence Protestante, ireo tompon’andraikitra avy tamin’ny Toby Pouru-St-Rémy.
Tao anaty fandaharana antsoina hoe Mosaïc no nanaovana izany, ka nivahiny tao Dr Lala, Raiamandrenin’ny Toby sy Vincent PRINCE, ao amin’ny Komitin’ny fanorenana.
Azonao henoina eto izany fandaharana izany: https://frequenceprotestante.com/diffusion/projet-mosaic-du-12052017/
Izao manaraka izao kosa ny vaovao miaraka aminy, ampitaina ho fampahafantarana ho antsika rehetra sy andraisantsika anjara. [ETO ny taratasy mivantana no azo raisina]
Pouru Saint Remy, faha 10 May 2017
Fifaliana ho anay indray no manome ny vaovao mikasika ny fanorenana ny trano ho Toby.
1. Mahatratra 59 358€ ny vola voaray amin’izao Mey izao amin’ny kaontin’ny Toby ary 2 633€ ny ao amin’ny Credofunding.
Araka ny resaka hatramin’ny desambra 2016 dia mbola tsy ampy hanombohana ny asa fanorenana io satria, 200 000€ no andrasana ahafahana manomboka izany. Dia mangataka ny fanohanana ny asa ara-bavaka sy fanentanana isam-piangonana (ara-bola), mba ahafahantsika manomboka ny asa atoato.
2. Araka ny fanao isan-taona dia atao amjn’ny 20 mey izao ny andron‘ny Toby. Ao amin’ny
70 rue Falguiere, Paris 75015 no hanatanterahana azy. Andro iarahana mifarimbona sy andro ifankalalantsika io ka anasana ny rehetra tsy an-kanavaka.
3. Misy indray ny resadresaka (« interview ») natao ao amin’ny Radio Fréquence Protestante ny 12 mey amin’ny iray sy fahefany atoandro. Ny tafatafa natao tamin’izany dia mikasika ny asan’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Toby Pouru any amin’ny faritra Ardennes iny.
Manasa antsika hihaino amin‘ny radio satria fomba fampahafantarana ny asantsika eto Frantsa koa io sady maneho ny fandraisantsika anjara amin’ny ﬁainana Kristiana ankapobeny eto Frantsa.*
4. Miandry ny taratasy fahazoan-dàlana hanorina na dossier permis de construire avy amin’ny Maitre d‘oeuvre isika izao.
Anjaran’ny manampahaizana amin’izany, ao anatin’ny Vaomiera Fanorenana, no hijery, hanakiana, ary hanatsara, alohan’ny ahafahana mametraka ny dossier amin‘ny ﬁtatanan-draharaha.
5. Farany dia tokony tapitra tamin’ny 26 aprily teo ny fanangonarn-bola natao niaraka tamin‘ny Credo-funding. Maneho sahady ny ﬁsaorana ho antsika rehetra izay nandray anjara, na koa nanaparitaka manodidina io hetsika iray io. Rehefa nanao tolotra vaovao anefa ny Credofunding, hanohizana io tetikasa io maimaim-poana dia nanapa-kevitra ny Vaomiera Fanorenana fa hotohizana ny asa. Mbola tsy tapaka izany ny daty fahataperany hatreto.
Manao veloma ﬁnaritra anareo amin’ny anaran’i Jesosy Kristy Tompo.